Xafiiska Guriyeynta Taageerada - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Xafiiska Guryeynta Taakuleynta
Waxaa jira guryo la’aan baahsan oo loo qabo dadka qaba jirro maskaxeed oo daba-dheeraatay ama cilladaha mukhaadaraadka. Kumanaan reer Washington ah ayaa ku xayiran goobaha hay'adaha, ama waxay hoy la'aan u yihiin la'aanta guryo ku habboon.
Sannadkii 2017-kii Sharci-dejinta Washington waxay lacag siisay Waaxda Ganacsiga si loo abuuro Maareeye Guryeyn Taageero leh. Jagadan waxaa loo xilsaaray isku dubaridka Maamulka Daryeelka Caafimaadka (HCA), Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka (DSHS) iyo wakaaladaha kale ee gobolka si loo ballaariyo helitaanka guryo taageero ah oo loogu talagalay dadka qaba xaaladaha caafimaadka maskaxda ama dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha.
Guryeynta taakuleynta ah, oo mararka qaarkood loo yaqaan Guryeynta Taageerada Joogtada ah, waxay siisaa macaamiisha xaqa u leh kabitaan joogto ah oo kiro ah. Waxay kaloo diyaarisaa adeegyo iskaa wax u qabso oo iskaa wax u qabso ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo kiraystayaasha deganaanshaha guryaha. Guryeynta taakuleynta ah waa faragelin guriyayn oo muhiim u ah bulsho kasta oo ku nool Washington, waana qeyb ka mid ah xalka joojinta hoy la'aanta.
Sharciga Yaraynta Mulkiilaha Gobolka Washington (RCW 43.31.605) wuxuu dhaqan galay Juun 7, 2018. Waxay siisaa milkiileyaasha guri dhiirigelin ah waxayna ku darsadeen amaan si ay ula shaqeeyaan kiraystayaasha helaya kaalmada kirada. Barnaamijku wuxuu siiyaa mulkiilaha ilaa $ 1,000 magdhow ahaan xoogaa casriyayn ah oo loo baahan yahay u guuritaan, ilaa afar iyo toban maalmood oo kirada la waayi karo iyo illaa $ 5,000 oo ah u qalmitaannada u qalma ee kireystuhu u geysto inta lagu jiro kiraysiga. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo websaydhka.
Guri ka saariddu waxay cadeysay inay horseed u tahay kiisaska cusub ee hoy la'aanta Washington oo dhan. Barnaamijka Ka Hortagga Kireysiga wuxuu ka faa'iideystaa milkiilaha iyo kireystaha labadaba adoo dayactiraya heshiiska kirada. Tani waxay ka horjoogsaneysaa milkiileyaasha inay wajahaan boosas banaan waxayna ku wareejinayaan qasaaraha iyadoo laga hortagayo guri ka saarid taasoo caqabad ku abuureysa awooda kiraystaha inuu helo oo kireysto guryo mustaqbalka ah.
Barnaamijka Ilaalinta Kireysiga ee Gobolka Washington (2019 wax ka beddelka RCW 59.18.410 (3) iyo 43.31.605 (c)) wuxuu dhaqan galay Juun 29th, 2019 Barnaamijka wuxuu yareynayaa hoy la'aanta iyadoo u fidineysa gargaar kiraystayaasha dakhligoodu hooseeyo ee wajahaya in laga saaro lacag bixin la'aan kiro Kiisaska maxkamada ogolaatay, Ganacsigu wuxuu amaah ku meelgaar ah u siinayaa mulkiilayaasha si ay u ilaashadaan kiraysiga Kireystayaasha waxay haystaan ​​ilaa 90 maalmood inay dib ugu soo celiyaan amaahda. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo website-ka.
Barnaamijyada Kaabista Guryaha Joogtada ah
Caawimaadda Kireynta Caafimaadka Habdhaqanka Bulshada (CBRA) iyo Guryeynta iyo Soo-kabashada iyadoo loo marayo Barnaamijyada Kaabidda Muddada Dheer (HARPS LTS) waxay bixiyaan kabitaan joogto ah oo kiro ah oo loogu talagalay shakhsiyaadka halista badan leh iyo qoysaska leh xaaladaha caafimaadka dabeecadda. Markii lala kaashanayo barnaamijyada bixiya adeegyada guryeynta ee taageerada leh sida barnaamijka Washington ee aasaaska Taageerada Bulshada (FCS), barnaamijyada Gabowga iyo Muddada-dheer (ALTSA), Guryeynta iyo Soo-kabashada iyada oo loo marayo barnaamijyada Adeegyada Isku-falka (HARPS), ama kuwa kale, dadka aadka u nugul baahiyaha caafimaadka hab dhaqanka waxay leeyihiin fursado ay si madax banaan ugu noolaadaan bulshada ay doortaan.
Bisha Luulyo 2020, Xafiiska Taageerada Guriyeynta ayaa bilaabi doona howsha isku darka barnaamijka CBRA iyo HARPS LTS iyadoo loo marayo magaca Barnaamijka Caawinta Kireynta Caafimaadka Habdhaqanka Bulshada.
Booqo bogga halkan.
Qeybta 811 Bandhigga Kaalmada Kireynta Mashruuca (811 PRA) ee ay siiyeen Ganacsiga ee Xafiiska Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka (HUD) oo ah $ 5.7 milyan ayaa siin doonta kaalmada kirada ku saleysan mashruuca qoysaska dakhligoodu aadka u hooseeyo, ee aan da ’ahayn ee naafada ah muddo ee shan sano (oo leh cusbooneysiin sanadle ah intaas ka dib iyada oo lagu saleynayo qoondaynta Congress). Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo bogga.
Iskuxirka Barnaamijka OSH
Xiriiro Kale oo Muhiim ah
Agaasimaha, Xafiiska Guryeynta Taageerada ah